Maxaad kala Socotaa Magaalooyinka laga Guuray ee ku yaalla Adduunka + Sawirro – fogaanarag
Maxaad kala Socotaa Magaalooyinka laga Guuray ee ku yaalla Adduunka + Sawirro
Oradour-sur-Glane waa Magaalo yar oo ku taalla Dalka Farnsiiska taas oo si sahlan u cabsi galinaysa qof walba ee arka waayo waxaa wali ka muuqda raadka, iyo burburkii ka soo gaaray Dagaalkii labaad ee Aduunka.
Magaaladan oo gabi ahaanba laga guuray tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay ku basbeeshay dagaalkii labaad ee Aduunka ayaa laga dheehan karaa qaladaadkii taariikheed ee horay u soo dhacay kuwaas oo ku salaysnaa xasuuq bulsho iyo rabshado joogta ah.
Ciidamadii Naziyiinta ayaa ku duulay Magaaladaasi 10 kii June 1944 kadib markii loo sheegay in lagu qabsaday mid ka mid ah saraakiishoodii, waxaana ay halkaasi ku gumaadeyn 642 qoys oo nolosha ay ku qubeen kadibna ay burburiyeen Magaalada oo dhan.
Markii uu dhamaaday Dagaalka ayay Fransiiska Meel aanan ka fogeyn magaaladaasi ay ka sameeyeen Magaalo cusub oo ku magac ah mida baaba,day waxaana Madaxweynihii Fransiiska ee xiligaasi Charles de Gaulle uu amray in Magaalada Burburtay lagu daayo sideeda, tan iyo waqtigaasina dib looguma laaban oo waxaa loo tagaa Xusuus oo kaliya.
Madaxweyne Jacques Chirac ayaa 1999 ka furay Madxaf lagu soo bandhigo dhamaan waxyaabaha lagu xusuusan karo dadkii degaankaasi ee Naziyiinta ay xasuuqeen.
2.The Kowloon Walled City, Hong Kong
The Kowloon Walled City oo ka mid ah Hong kong, waxa ay 20 sano ka hor gabaad u aheyd dambiilayaasha ka soo baxsada Sharciga oo si walwal la,aan ah ugu noolaan jiray, balse hada waa magaalo laga guuray oo ka mid ah meelaha lagu xusuusto taariikhihii tagay.
Magaaladan oo markeedii hore ka dhisantay Hong Kong, China ayaa aheyd meel laga ilaaliyo Burcadda Badda ku soo duusha bariga balse Japan ayaa ku qabsaday Dagaalkii labaad ee Aduunka kadibna waxaa ku soo duulay ama ku batay burcad dambiilayaal ah, iyadoo Ingiriiska iyo China oo horey u soo maamuli jirayna ay diideen in ay wax ka qabtaan sidaas darteed ayay Magaalada u noqotay meel aysan ka jirin sharci iyo kala dambeyn.
Hadaba waxay Magaalada gabaad u ahaato dambiilayaasha ka ganacsada Maandooriyaasha, dhiiga dadka iyo haweenka jirkooda iibiya ayaa 1993 Ingiriiska iyo Chinaha oo iskaashaday ay burburiyeen Magaalada oo dhan dibna looma dhisan sidaas ayay ugu mid noqotay magaalooyinka laga guuray ee lagu xusuustaa taariikhdeedii hore.
3.Ruins of The Future ama San Zhi, Taiwan
Ruins of The Future ama San Zhi waxa ay aheyd Magaalo loo dhisay si casri ah oo ujeedada ay aheyd in ay soo jiidato maalqabeenada oo ay u soo dalxiis tagaan waxaana ay dhacdaa Dalka Taiwan, awood qarsoon oo aanan loo qeexi Karin si sax ah ayaa kala dhantaaltay qorshihii dhismaha quruxda Magaalada waxaana ka dhacay shilal gaari oo dad badan ay ku la,deen taas oo qasabtay in ugu dambeyn 1980 uu joogsaday mashquucii lagu hormarinayay Magaalada.
Waxaa jira warar sheegaya in shilalka ay si un ugu lug lahaayeen awood qarsoon oo ka imaanaysay qabuurihii askartii Hollandeeska ee joogi jiray Taiwan ay oo ah meesha laga dhisayay Magaalada, iyadoo markii dambana ay soo shaac baxday fikrad ka dhaadhacday shacabka Taiwan oo aheyd in aysan jirin qof u dalxiis tagayso meesha ay ku la,deen shaqaalo badan oo kuwa dhismaha ah walib aanan la garanaynin sababta ka dambaysay geeridooda.
Sidaas dartedna ay jirto awood qarsoon oo magaalada haysata iyadoo kadibna dowlada Taiwan ay go,aamisay in laga guuro illaa iyo hadana waxaa loo arkaa in ay tahay meel ay ka jirto awood qarsoon oo dadka ka hor istaagaysa waxa ay damcaan in ay ka smaeeyaan ama aan iraahdeen in ay tahay magaalo ay ku nool yihiin Ahlu qubuur isugu jira askartii hore ee Hollandeeska iyo shaqaalihii dhismaha eek u la,day shilalkii badnaa eek a dhacay.
Prypyat waxa ay aheyd Magaalo ku taallay Dalka Ukraine balse laga guuray kadib markii uu ka dhacay shil qasbay in shacabkii Magaalada oo gaarayay 50,000 oo qof ay si deg deg ah ugu kala qaxeen.
Warshad Nucliyeer ayuu ka dhacay shil lama filaan ah iyadoo kadibna saameysay Dadkii Magaalada oo dhan kuwaas oo u badnaa shaqaalihii warshada.
26 kii April 1986 ayay aheyd markii ay qaraxday warshada Nucliyeerka iyadoo halkaasi ay ku salfatay dad badan iyo dhamaan jiritaankii Magaalada, dadka ka badbaaday oo loo qaxiyay meel 30 km u jirta Magaalada ayaa si hal haleel ah ugu baxsaday iyagoo waxyaabo yar yar oo dharkooda u badan horay u sii qaatay.
Waxaaana wali laga dareemaa Magaalada raadkii uu ku yeeshay qaraxii warshada Nucliyeerka iyadoo dhawaanahaan ay sii burburayaan qaar ka mid ah dhismayaashii ku harsanaa, hadaba Magaalada sidaas ayay ugu mid noqotay meelaha laga guuray ee dib aanan loo dhisin.
Kadykchan waa magaalo yar oo ku taalla Dalka Ruushka oo Taariikhdeeda aysan sidaasi u fogeyn waxaa la dhisay markii laga dhamaaday dagaalkii labaad ee aduunka ujeedada ka dambeysayna waxa ay aheyd in laga qado macdanta
Hadaba markii ay kala go,een Midowgii Soviet, waxaa faa,iddo darro ku dhacday Macdantii laga qodayay iyadoo kadibna 1996 uu qarax ka dhacay goobtii ugu weyneyd ee laga qodoyay Macdanta dadka ay ku dhinteen.
Kadibna Masuuliyiintii Ruushka ayaa Go,aansaday in ay xiraan Goobihii macdanta dadkii deganaa Magaalada ay u rareen Magaalooyin kale.
Dhamaan dhismayaashii Magaalada ayaa la xiry waxaana laga jaray korontadii iyo kululaykii. Waxaana laga mamnuucay shirkaddii gaarka loo lahaa eek a adeegayay Magaalada si aysan ugu soo laaban dadkii laga raray.
2010 kii ayaa la sheegaa in ay ku noolaayeen labo qof oo ka madax adeegay in ay ka guuraan halka 2012 diina uu ku noolaa hal aday iyo labo ay oo uu haystay, Dowladda iyo shacabka Ruushka ayaa hada u arko meel aanan fiicneyn oo leh taariikh mugdi ah iyadoo gabi ahaanba ay noqotay meel laga guuray oo loo soo daawasho tago oo kaliya.
Magaalooyinka laga guuray waxaa ka mid ah Jaziirada Hashima oo ka tirsan Jaban, waxaana waxa aanan la qiyaasi Karin ah in nus qarni ka hor ay aheyd Magaalooyinka ugu dadka badan Adunka, waayo waxa ay ku taallaa meel muhiim u ah qaarada Aasiya.
Jaziirada oo ay lahaan jirtay shirkad lagu magacaabi jiray Mitsubishi ayaa can ku aheyd macdanta laga soo saaro gunta hoosew ee badda hase ahaatee markii ay gaartay heerkeedii ugu sareeyay ayaa 1960 kii ayaa dowladda Jaban ay faragalisay howlihii jaziirada ee macdanta laga soo saarayay Badda iyadoo kadibna shirkadii maamulaysay ay gabi ahaanba xirtay shaqadii ay ka waday Hashima.
Sidaas ayayna Magaalada ku noqotay meel laga guuray mar haddii ay ka tagtay shirkaddii bilowday howlihii ay ku dhisantay waxaana gabi ahaanba mamnuuc ahaa in loo safro muddo 35 sanadood ah.
2009 kii ayaa mar kale dib loo ogolaaday in la tagi karo balse waa waqti xeero iyo fandaal ay kala dhaceen oo waxba aysan ka jirin marka laga reebo dalxiis iyo in lag xoo xusuusto taariikhdeedii hore.
7.Craco waa Magaalo ka tirsab Talyaaniga oo ka mid ah Magaalooyinka laga guuray ee Caalamka waxaana adeegsada shirkadaha filimada oo ku duubta muuqaalada
Magaalada oo ah Magaalo ku taallo dhul buuralay ah oo sare ayaa dhibaato weyn kala soo kulantay dhul gariiro soo maray kadibna dadkii daganaa ku qasabtay in ay u kala hayaamaan Magaalooyinka kale ee Talyaan iga qaarkoodna aaday Waqooyiga Mareykanka oo ay ka mid yihiin dadka ugu caansan Mareykanka ee asal ahaan ka soo jeeda talyaaniga.
Inkastoo Maal aanan ka fogeyn ay noqotay Magaalada la iskuna dayay in dib loola mideeyo magaaladii hore hadana waa lagu guulaysan waayay in lagu soo celiyo sideedii hore, marka hada waxaa adeegsada shirkadaha sameeya filimada Taariikhiga ah oo filimada ay ku duubeen ay ka mid yihiin The Passion of The Christ (2004) by Mel Gibson, The Nativity Story (2006) by Catherine Hardwicke, Murder in the dark (2013) by Dagen Merrill